Yandisa amandla emizobo yeMacBook Pro yakho ngeSonnet Portable GPU | Ndisuka mac
Yandisa amandla emizobo ye-MacBook Pro yakho, nge-Sonnet Portable GPU
Kwabaninzi, iMacBook Pro yeyona Mac ilungileyo: inamandla kunye nokuphatheka. Kodwa inyani kukuba akukho qela ligqibeleleyo, ngaphandle kokuba iimfuno zakho zichanekile. Ngayiphi na imeko, kukho iiGPU zangaphandle kwintengiso ezisivumela ukuba siphucule amandla emizobo yeMac.Kule meko, sinezinto ezahlukeneyo zelaptop, kodwa sakuba sifikile kwidesktop, sinokusebenzisa lonke Amandla eGPU, aqhotyoshelwe kwiqela lethu. Enye yezi nkampani yile Sonnet, ekhuphe i-Thunderbold 3 eGPU, Ibhokisi yokuqhekeka ye-eGFX. Kodwa eli qela lalinengxaki, ubukhulu bayo obukhulu.
Ukwazi oku kusikelwa umda ngokubhekisele ekusebenzeni kwayo, inkampani igqiba kwelokuba ikhuphe uhlobo oluncinci kakhulu, kubukhulu kunye nobunzima. Ke ngoko, namhlanje sine Ukuqhekeka kwePuck eGFX, kulula kakhulu ukuhambisa.
Umsebenzi ulula kakhulu. I-eGFX iqhagamshela kwi-Mac kunye ne-voila. Ubukhulu bayo busisikwere, ngokufana neApple TV 4, 15 iisentimitha ngeesentimitha ezili-13. kunye neesentimitha ezi-5 ubukhulu. Ubunzima bayo bujikeleze i-2kg. Kumaqhagamshelo angasemva, sifumana i-HDMI kunye ne-3 DisplayPort.
Kodwa eyona nto ibalulekileyo ingaphakathi layo. Sineenkqubo ezimbini:AMD Radeon Rx 560, kunye nemodeli enamandla ngakumbi, AMD Radeon Rx 570. Zombini iigrafiki zine-4Gb yememori ezinikezelweyo, eqinisekisa ukuhambisa iifayile ze-4k kwi-60 hz. Imizobo ilingana naleyo isetyenziswa yiApple kwiMac. Imizobo ekwi-21 ″ iMac mounts enesikrini se-retina iyafana kakhulu ne-AMD Radeon RX 560. Ngelixa i-AMD Radeon RX 570 iyafana naleyo ifakwe kwi-27 ″ iMac.
Ke ngoko, ukuba ufuna amandla emizobo, ngakumbi kwiimodeli ezili-13,, izisombululo ze-eGPU zinokuqhuba umhla nosuku. Ungasifumana zombini isisombululo kwi iphepha isuka kwi-Sonnet, ngexabiso le- $ 449 yokuba i-AMD Radeon RX 560 inyuse kunye ne- $ 599 yemodeli ye-AMD Radeon RX 570.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Yandisa amandla emizobo ye-MacBook Pro yakho, nge-Sonnet Portable GPU
Isebenza kwiWindows ???
UApple utyholwa ngokutyhila iimfihlo zesoftware yeQualcomm kwiiKhuphiswano
Iziphumo zezemali ze-Apple kwikota yokugqibela yezemali